မချက်ပြုတ်ခင် မှာ ကြက်ဥကို ဘာကြောင့် ရေမဆေးသင့်လဲ ဆိုတာ သိပါသလား…. – Nyi Ma Lay
မချက်ပြုတ်ခင် မှာ ကြက်ဥကို ဘာကြောင့် ရေမဆေးသင့်လဲ ဆိုတာ သိပါသလား….
By Nyi Ma LayPosted on May 4, 2021
ဘယ် ဟင်းသီး ဟင်းရွက်ေ တွကို မဆို မချက်မြ ပုတ်ခင်မှာ ရေသန့်စင်ရ မယ်ဆို တဲ့အရာက ကျွန်မတို့ရဲ့ စိတ်ထဲ မှာ စွဲမြဲပြီး သားဖြစ်မှာပါ။ ကျွန်မတို့ဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွှတ်အောင် စားသော က်ရ မှာဖြစ်တာကြောင့် ဟင်း သီးဟင်းရွက်တွေ သန့်စင်နေ တာ ပိုကောင်းပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တချို့အစား အစာတွေက ရေသန့်စင်လိုက်တာနဲ့ ကောင်း တာထက် အန္တရာယ် ပိုဖြစ်စေပါတယ်။ လူေ တာ်တော်များများ ကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ ကြက်ဥတွေ ကို ချက်ပြုတ်မကြော်ခင်မှာ ဖုန်မှုန့်၊ ရောဂါပိုးမွှားတွေ မရှိအောင် ရေဆေး ပစ်ကြပါတယ်။
အမေရိကန်စိုက် ပျိုးရေးဝန်ြ ကီးဌာနအရ စီးပွားဖြစ်ထုတ်လု ပ်ထားတဲ့ကြက်ဥေ တွအားလုံးကို သန့်စင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ စည်းမျဉ်းတွေ ရှိပါတယ်။ ရေသန့်စင်လိုက်ခြင်းက ကြက်ဥရဲ့မျက်နှာပြင်က သ ဘာဝ အလျောက်ကာ ကွယ်ပြီးသား အုတ်ထားတဲ့အ လွှာတွေကို ဖယ် ရှားပစ်ပါတယ်။ ကြက်ဥတွေကို သန့်စင်ပြီးတဲ့အခါ ကြက်ဥတွေကို ဘတ်တီးရီး ယားမရှိအောင် အုတ်ပေးထားတဲ့ သတ္တု အဆီ အနှစ်တွေကို ဖယ်ရှားပစ်လိုက် သလိုဖြစ်စေပါတယ်။
တချို့လူတွေကေ တာ့ သန့်စင်တဲ့အ ပိုင်းကို မကျော်ပစ်ချင်ကြဘူး လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကြက်ဥေ တွကို ရေသန့်စင် လိုက်ခြင်းက ဘတ်တီးရီးယားပိုး မွှားတွေကို ပိုပြီး ပြန့်နှံ့စေပါတယ်။ တက ယ်တော့ ကြက်ဥတွေကို သန့်စင်ဆေးေ ကြာလိုက်ခြင်းက ကြက်ဥအခွံတွေဟာ စိမ့်ဝင်နိုင် စွမ်းရှိတာကြောင့် ကြက်ဥအ တွင်းထဲကို ဘတ်တီးရီးယားတွေ ဝင်ရောက်စေပါတယ်လို့ ကျန်းမာေ ရးပ ညာရှင်တွေက ပြောပါတယ်။
ဘတ်တီးရီးယားတွေက ကြက်ဥရဲ့ မျက်နှာပြင်မှာ ရှိနိုင် တာကြောင့် ရေသန့်စင်လိုက်တာနဲ့ ကြက်ဥအထဲကို ဘတ်တီးရီး ယားတွေ ဝင်ရောက်သွားစေပါတယ်။ ဒါ က ကျွန်တော်တို့ စားလို့ရတဲ့ ကြက်ဥအပိုင်းကို အဆိပ်တောက်ဖြစ်စေပါတယ်။ ရေသန့်စင်ဆေးကြောတာကို မကျော်ပစ်ချင်ရင်တော့ ရေနွေးနွေးေ လး အသုံးပြုပါ။ ဆပ်ပြာအသုံးမပြုပါနဲ့။
Previous post နာမည်ကြားလိုက် ရုံနဲ့ ကြက်သီး ထသွားေ စမယ့် မြန်မာနိုင်ငံ မှထူးထူးဆန်းဆန်းမြို့ရွာ များ
Next post တစ်ခုရွေးလိုက်ပါ….သင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ဆွဲကြိုးလေးတွေ က တစ်ဆင့် သင်ဟာ ဘယ်လိုကောင်မလေးလဲ ပြောပြမယ်